Qaboojinta dareeraha ayaa halkaan lagu joogayaa? | Wararka IPhone
Samsung shalay waxay soo bandhigtay calankeeda cusub, Samsung Galaxy S7 iyo S7 Edge, laba taleefan oo casri ah oo isdaba joog ah oo "novelties" ugu weyn ay si hufan ugu soo kabanayaan laba astaamood oo jiilkii hore lumiyay: biyo-mareen (aan la quusin karin) iyo xusuusta ballaarinta iyada oo loo marayo micro SD. Laakiin inkasta oo ayna ahayn mid ka mid ah riwaayadihii waaweynaa ee ay cabireen cinwaanada wararka, haddana waxay keeneysaa wax cusub sida qaboojinta dareeraha. Sida hadday tahay gaari, wareeg yar oo qaboojiye ku dhex jira ayaa mas'uul ka noqon doona kuleylka aaladda. Maaha kii ugu horreeyay ee casriga ah ee haysta, laakiin xaqiiqda ah in Samsung ay dooratay in lagu daro tiknoolajiyadda noocan ah ayaa laga yaabaa inay u taagan tahay isbeddel cusub oo soo-saareyaasha kale ah. Apple ma dooran doontaa nidaam la mid ah? Miyuu dareeraha qaboojiyaha yimid si uusan u bixin?
Nidaamka qaboojinta dareeraha ah ee taleefannada casriga ah waa mid fudud oo in kastoo ay u muuqan karto wax la yaab leh, kombiyuutarro badan ayaa adeegsanayay muddo dheer. Wareeg ayaa maraya qaybaha ka baxa qalabka kuleylka ugu badan. Kuleylkaas ay bixinayaan waxay uumi bixisaa qaboojiyaha, qaboojinta qaybahaas (processor-ka kiiskan). Intaas ka dib, gaaskan ka dhashay uumiga dareeraha qaboojiyaha wuxuu dhex maraa meeris wareeg ah halkaas oo uu mar labaad isku ururiyo, kuleylka kuleylka, kuna laabo xaaladdiisa dareeraha, si uu u dhaafo, mar horena u qabow, iyada oo loo marayo processor-ka.
Halka Samsung iyo noocyada kaleba ay umuuqdaan inay sharad ku hayaan nidaamkan qaboojinta, Apple xitaa waxay ka saareysaa taageerayaasha kumbuyuutarradeeda gacanta, si fudud iyadoo la adeegsanayo qaab dhismeedka qalabka iyo aluminium ahaan nidaam ahaan si ay u baabi'iyaan kuleylka qaybaha ay ka kooban yihiin.. Aluminium waa shey aad u fiican oo kuleylka ku faafiya, Applena waxay ku isticmaashaa qalabkeeda oo dhan. Tani waa sababta saxda ah ee ay MacBooks uga sii kululaaneyso laptops-yada kale, ma ahan cillad ama wax xun, waa habka ay uga takhalusaan kuleylka.
Qaboojinta dareeraha ah nidaam ahaan si loo hagaajiyo awoodda iyo waxqabadka qalabka? Tufaaxu miyuu ku dambayn karaa ku-tiirsanaanta isbeddelka warshadaha oo isticmaali karaa isla wareegga qaboojinta dareeraha ah ee qalabkiisa? Shakhsiyan waan ka shakisanahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Qaboojinta dareeraha ayaa halkaan lagu sii joogayaa?